Sida loo saar nuqul Songs Si fudud
> Resource > masixi > Sidee si fudud saar nuqul Songs in Your Big Music Library
Haddii aad heysato maktabad music quruxsan weyn oo laga helay ilo kala duwan sida dooxeen, qoraalana iyo dajinta ama Lugood maktabad culus in la wareejiyo ka Mac Mac inay ama PC in PC, waxaa jira fursad aad ku shubmaan arrimaha gabayo nuqul baahneyn qaadashada aad boos drive adag. Waxaa dhacda in inta badan oo naga mid ah oo sida maktabadda korayo, sidaas la sameeyo dhibaatooyinka yimaada leh. Markaas waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay xoogaa waqti ah ku qaataan helitaanka hab macquul ah in la tus ka, taas oo u noqon karto arrin waqti lumis qaban.
Laakiin ma haatan waxaa dhididka. Halkan waa waxa aad raadinayso. The Wondershare TidyMyMusic u Mac si toos ah u ogaado tus ka ah maktabadda aad u weyn oo aad noqon kartaa garsooraha inuu go'aan ka gaari oo mid ka mid ah si loo soo saaro. Tutorial soo socda idinku hanuunin marayo.
1 barnaamijka dar maktabadda music aad
Download TidyMyMusic si loo soo dajiyo aad Mac. Burcad barnaamijka oo si toos ah maktabadda Lugood aad ku darto heesaha oo dhan si ay u saxaarad faylka hoos nidaamsan Lugood iskaan doonaa.
Fiiro gaar ah: Haddii aad leedahay heeso badan oo aan la keeno si ay Lugood, waxaad aadi kartaa oo eynaan Music inay jiidi folder music si ay saxaarad file ama guji badhanka File Open in ay dajiyaan heesaha.
2 Raadi songs nuqul
Tag qayb ka madax suuqa kala barnaamijka ee. Markaas calaamadee sanduuqa ku calaamadaysan "Raadi labalaabka Songs" oo guji badhanka Scan. Ka dib markii in, barnaamijkan bilaabi doonaan in ay ogaato dhammaan gabayadii nuqul.
3 saar gabayadii nuqul
Ka dib oo dhan tus ka waxaa laga helaa baxay, guji labalaabka Songs in bar xaaladda oo heli heesaha oo tus in saxaarad faylka. Guji mid ka mid song oo dhan tus ay la soo bandhigi doono khaanadda saxda ah. Waxaad go'aansan kartaa mid ka mid in ay tirtirto, taas oo ka mid ah in uu sii joogo la beddelo iskutallaabta oo sax bidixda ee heesta. Markaas button Dedupe guji si aad u hesho shaqada ka saareen sameeyo. By default, gabayga oo la jiray oo tayo sare la saxday doonaa oo kuwa kale u gudbeen.
U dayactir songs mislabeled: haddii aad sax checkbox ee Search for Songs Allaha oo guji badhanka Scan, markaas barnaamijka si toos ah ka heli doontaa dhammaan macluumaadka ee songs mislabeled.
Edit macluumaadka song: guji hees iyo icon Edit ah khaanadda saxda ah, ka dibna waxaad buuxin kartaa duurka tafatirka macluumaad kasta oo aad jeceshahay ama jiidi image ah in meesha tahay albumka.
Fudud, miyaanay ahayn? Sidaas joojin sugayaan oo yaabban, kaliya download barnaamijkan si uu u siiyo go a oo aad marna la sii dayn doonaa.
15 Apps in Clear iPhone Xiriir